China inotakurika inokurumidza gan mhando c adapter yemadziro usb charger PD 18W Kugadzira uye fekitori | Staba Electric
Inotakurika inokurumidza gan mhando c adapter yemadziro usb charger PD 18W
*Chaja PD 18W Tsananguro Yemashoko
Iyi compact 18W PD charger ine USB-simba dhirivhari inoreva kukurumidza kuchaja kune ako zvishandiso. Iyi yekushanya-inoshamwaridza maviri USB madzirojaja inogadzirwa kununura ka5 simba remajaja akajairwa kune maviri madhijitari panguva imwe chete.
Inoratidzira shanduko dzichangoburwa mukumhanya-mhanya tech tech, USB-C simba kuburitsa uye adapta yekumhanyisa kuchaja, inojaja imwe chete ndizvo zvese zvaunoda kuti usimbise zvigadzirwa zvako zvazvino uye ugare pamberi penzvimbo yechero zvemagetsi emangwana. Ose ari maviri emachiteshi anokwanisa kuendesa kusvika ku18W yeakakwira-magetsi kubhadharisa kune zvese kubva kumafoni efoni uye mahwendefa kune ane simba-ane nzara USB-C malaptop senge 12-inch Macbook. Inotsigira nekukurumidza kuchaja kwe iPhone kuchaja iPhone 8 kana gare gare kubva zero kusvika 50% mumaminitsi makumi matatu netambo inosanganisirwa, uye zvimwe zvishandiso pakumhanya kwakaringana.?
Ine chinangwa yakagadzirirwa kufamba-inoshamwaridzika, ino homwe-yakakura saizi PD PD charger inokwana nyore kune chero nharaunda nharaunda kumba kana kana iwe uri kunze. Iyi compact charger inogara yakati sandara kumadziro kuti ikwane nyore kuseri kwemidziyo kana munzvimbo dzakaomarara-kusvika-kusvika. Iyo zvakare yakakwana-saizi kuti ikwane muhomwe kana bhegi, zvinoreva kuti uchave nekwaniso yekukurumidza kuchaja chero kwawakananga. Yekukurumidza PD charger ine yakachengeteka uye yakavimbika-kudzivirira kwekupfuura kwemagetsi, kuwandisa, kupisa uye diki dunhu.
PD wall charger ine kukwirisa kwepamusoro & kushanduka, maviri-mu-imwe gadziriro yekuchaja iyo inokwanisa kutsigira ese USB (A / C) zvigadzirwa zvine simba zvakaita semafoni uye mapiritsi ekushanda zvakazvimiririra kana panguva imwe chete. Iyo USB yemudhuri charger ine inogadziriswa plug dhizaini inokutendera iwe kudzivirira kudzivirira zvimwe zvitoro uye repositions iyo USB A / C chiteshi kuti ive nyore kuisa tambo yakabatana - kunyanya inobatsira kana uchishandisa mune tambo yemagetsi kana yekudzivirira dziviriro ine akawanda-maresitoreti. USB PD mudhaja ine Intelligent simba kugoverwa kwemidziyo.
*Wall Chaja 18W Parameter
Kuendesa Simba Fast PD Wall Chaja
Ipa mafoni ako ese uye mapiritsi (anosanganisira iPhone nePadad) simba rinopisa-rinokurumidza, pamwe nekuendesa simba kuchipa yakakwira-mhanya mutero.
Kugarisana & Kugadzikana USB Adapter Charger
Mbiri-in-imwe yekuchaja mhinduro iyo inokwanisa kutsigira ese USBC uye USBA zvigadzirwa zvine simba senge iPhone, Samsung uye mamwe ma USBC zvishandiso zvinoshanda zvakazvimiririra kana panguva imwe chete.
Yakachengeteka & Yakavimbika Nhare mbozha PD Yekukurumidza Chaja
Dzazvino tekinoroji inosimudzira kushanda nemazvo uye kugadzirisa kupisa kupisa kunodzivirira michina kubva kune yakawandisa azvino, kupisa, uye kuwandisa.
Inotakurika uye Inotakurika USB Chaja Adapter
Tora chiraji chako chero kupi uine homwe-inoshamwaridzika saizi uye yakapetwa plug, yakanyanyisa compact fomu chinhu uye zvakapetwa prongs chengetedza yakanyanya kutakurika kupi zvako kwaunoenda.
Pashure: Nyowani mizhinji yemadziro echiteshi inokurumidza kuchaja usb charger PD30W
Zvadaro: SVR-172 Series (0.5kVA-5kVA) Relay Type Voltage Stabilizers ine Ruvara Ratidza